Iminyaka engama-20 inamava kwimveliso yefanitshala eqinileyo yempahla, ifanitshala yeklasikhi, iiseti zegumbi lokulala, amagumbi okutyela, igumbi lokuhlala liseke | Ifanitshala ye-tenwin
Ukuthozama okuthobekileyo bubugcisa,
Ixesha lingqina iimvakalelo eziyinyani!
Injongo yethu kukwanelisa abathengi bethu ngokuchaneka okuphezulu kunye nomgangatho onokuthenjwa ukuqinisekisa ukuba bonke abathengi banokuziva bekhululekile kwaye bezithembile ngezinto zethu kwiimveliso zabo. Banemisebenzi emininzi eqinisekisa ukwandiswa kunye nokusetyenziswa.
Uyilo lwamva nje lwesofa yakudala eyenziwe ngomthi eyenziwe eChina | UGoodwin GH59
Ikhaya lilapho intliziyo ikhoyo. Khetha isofa eyingqayizivele, yakudala yamaplanga enamaxabiso afanelekileyo kwaye enziwe kakuhle kwikhaya lakho lamaphupha. Singumenzi owaziwayo wefenitshala yaseMelika eTshayina, iGoodwin lolona khetho lwakho lubalaseleyo. Nxibelelana nathi ukuze ufumane ulwazi oluthe kratya lweplanga. Nxibelelana: Tess Ifowuni: 0086-76923188817 okanye iselfowuni: 0086-13925525570 Indawo yeWebhusayithi: www.goodwinfurniture.com
Isofa yaseChina, isofa emnyama emnyama kwigumbi lokuhlala iGoodwin GH55
Sizimisele kuyilo kunye nokuveliswa kwesofa emnyama yakudala yegumbi lokuhlala ngaphezulu kweminyaka engama-20. Ukuzabalazela umgangatho wemveliso kunye noyilo. Ifenitshala kaGoodwin, umzobi wobomi. Singumenzi owaziwayo wefenitshala yaseMelika eTshayina, iGoodwin lolona khetho lwakho lubalaseleyo. Nxibelelana nathi ngesofa emnyama engaphezulu ye-antique yolwazi lwegumbi lokuhlala. Nxibelelana: Tess Ifowuni: 0086-76923188817 okanye iselfowuni: 0086-13925525570 Indawo yewebhu: www.goodwinfurniture.com
Ifenitshala ye-Goodwin yeyona nto ishushu i-antique ye-antique emhlophe ye-Antique GH43
Sizibophelele kuyilo kunye nemveliso yexabiso elishushu lokuThengisa eliMhlophe le-Antiquique Mhlophe ngaphezulu kweminyaka engama-20. Ukuzabalazela umgangatho ongcono wemveliso kunye noyilo. Ifanitshala ye-tenwin, umculi wobomi.Singumenzi wefenitshala waseMelika odumileyo kwi-China, i-Goodwin yeyona nto iphambili.Nxibelelana nathi ngexabiso elishushu lokuhambisa i-antiquive the the the the the the the the the the the the the the the the windows.UQHAGAMSHELWANO: TESSIFONI:Iwebhusayithi: www.goodwinfur.com
Uhlobo lweVilla lokufika kwebhedi yentsimbi entsha | UGoodwin GF01
Ukufika okutsha kwebhedi yakudala yesikhumba yeyona mveliso yethu iphambili, ifanitshala yekhaya eqinileyo yomthi kubandakanya amagumbi okulala, iisofa, iiseti zokudlela, iitafile zekofu, iitafile, izitulo, iibhedi, nokunye. Umgangatho wokuqala, uyilo lwe iconic. Singumenzi wefanitshala odumileyo waseMelika eTshayina, iGoodwin lolona khetho lwakho lubalaseleyo. Qhagamshelana nathi ngolwazi oluthe kratya lokufika kwe-antique yesikhumba. Nxibelelana: Tess Ifowuni: 0086-76923188817 okanye iselfowuni: 0086-13925525570 Indawo yewebhu: www.goodwinfurniture.com
Inkonzo yokwenza ngokwezifiso kwiimfuno ezizodwa okanye ezinzima zomsebenzi.
1.Ukubuza: Abathengi baxela into oyifunayo, iinkcukacha zomsebenzi, umjikelo wobomi, kunye neemfuno zokuthotyelwa.
2. Uyilo: Iqela loyilo liyabandakanyeka kwasekuqaleni kweprojekthi yokuqinisekisa ezona mveliso zenziwe kakuhle ukuze zilungele iimfuno zabaxhasi ..
3. Ulawulo loMgangatho: Ukulungiselela ukubonelela ngezakhiwo ezisemgangathweni ophezulu, sigcina ukusebenza ngokufanelekileyo& Inkqubo yoLawulo loMgangatho efanelekileyo.
5. Singazilungiselela ukuthutha ii-odolo- nokuba zenziwe ziinkonzo zethu zangaphakathi, abanye abathengisi okanye indibaniselwano yazo zombini.
Sibhaptizwe ngokupheleleyo kwimveliso yabathengi bethu. Kodwa asihlali nje kwiimpawu ezithile zecandelo; Siphinde singene nzulu kwimibuzo efana nale: "Yintoni eyenza abathengi bethu babe nemincili?" "Singawuqala njani umnqweno wokuthenga wabathengi wokugqibela?" Nantsi into esiya kuyenza nawe. Le yindlela esiyiguqula ngayo iprojekthi yakho ibe yiprojekthi yethu.
Kutshanje kwezinto zokomoya zenene ezivela kubathengi bethu bakutshanje kwihlabathi liphela
Kutshanje kwezinto zokubamba zenene ezivela kubathengi bethu bakutshanje kwihlabathi liphela.Singumthengisi wefenitshala we-American Woot Ngeemveliso ezisemgangathweni kunye nenkonzo ephezulu, iimveliso zethu zigutyungelwe kwikona nganye yehlabathi.Uninzi lwabathengi bathenga ifanitshala kumzi-mveliso wethu kwaye bafana nefenitshala yethu kakhulu njengengxelo yevidiyo.Nxibelelana nathi ngefanitshala eqinileyo yenkuni.UQHAGAMSHELWANO: TESSIFONI:Iwebhusayithi: www.goodwinfur.com
I-Goodwin Whownel Wandlid kwi-whowder yakhe inika ingxelo
Ividiyo yokwenyani kunye nengxelo evela kubathengi bethu. Uthanda ifanitshala yethu kakhulu.Uyilo oluzenzekelayo lwefanitshala luyafumaneka.Nceda unxibelelane nathi ngefanitshala eqinileyo.UQHAGAMSHELWANO: TESSIFONI:Iwebhusayithi: www.goodwinfur.com
Itafile yekofu yekofu kwi-BORSE YABASEBENZI BENKONZO YABASEBENZI BENKONZO YAM219
Khetha ifanitshala elungileyo yenkuni yenkuni yakho (igumbi lokuhlala / igumbi lokulala / igumbi lokutyela / njl). Khetha kwiicebo lethu ezahlukeneyo kwaye wongeze kwi-Decor yegumbi lakho. Ivenkile kwi-Intanethi.Nxibelelana nathi ukuze ufumane ulwazi lweenkuni zenkuni.UQHAGAMSHELWANO: TESSIFONI:
Ifenitshala ye-Goodwin i-Wight Wa184 i-Did ebekelwe umzi-mveliso wabaxumi bethu
Ifanitshala ye-Goodwin yindawo yokutyela yeenkuni eseta umthengisi wase China. Iminyaka engama-20 yamava okuthumela ngaphandle iyeza. Ngeemveliso ezisemgangathweni kunye nenkonzo ephezulu, iimveliso zethu zigutyungelwe kwikona nganye yehlabathi.Singumvelisi wefenitshala wefenitshala waseMelika e-China, i-Goodwin yeyona nto iphambili kuwe.Nxibelelana nathi ngenkuni yokutsala iinkuniUQHAGAMSHELWANO: TESSIFONI:Iwebhusayithi: www.goodwinfur.com
Dongguan Goodwin Ifenitshala Co., Ltd.
I-Dongguan Goodwin Furniture Co., Ltd yasekwa ngo-2001, ebekwe e-Houjie, e-Dongguan, idolophu eyaziwayo e-China, egubungela indawo ye-120,000 yeemitha zesikwere. Sigxila kwisiphelo esiphakamileyo sesimbo saseMelika ifanitshala yokhuni oluqinileyo, kwaye sizibophelele kuyilo, imveliso kunye nokuthengiswa kwehotele / ifanitshala yasekhaya.
Okwangoku, sinabasebenzi abangaphezulu kwama-580, kubandakanya phantse i-100 yobunjineli kunye nabasebenzi bezolawulo lobugcisa kumanqanaba ngamanqanaba. Iqela loyilo libalaseleyo kunye neqela lenkonzo, elithobela ukugqwesa komgangatho wemveliso kunye nokusukela imisebenzi yezandla egqibeleleyo. Njengomenzi wefanitshala oqeqeshiweyo, siyasebenzisana namashishini amaninzi awaziwayo anje ngeSheraton, iShangri-La, i-InterContinental, iMarriott, iRitz Carlton, njlnjl. , Bulgaria, France, Dubai nakwamanye amazwe amaninzi. Bonke abathengi banelisekile ngumgangatho wethu.
Ifanitshala yaseGoodwin ibambelela kwingcinga yophuhliso oluzinzileyo, ejolise ekunikezeleni abantu ifanitshala ekumgangatho ophezulu kunye nobomi obuhle. Siqinisekile ukuba umgangatho wemveliso kunye nesitayile sakho sinokuhlangabezana neemfuno zakho. Sibamkela bonke abathengisi beshishini bamanye amazwe ukuba banxibelelane nathi kwaye batyelele umzi-mveliso wethu!